Home Wararka Gudaha Madaxweyne Xasan oo kulan muhiim ah la yeeshay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Imaaraadka
Madaxweyne Xasan oo kulan muhiim ah la yeeshay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Imaaraadka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay Jaaliyadda iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta.
Madaxweynaha ayaa Jaaliyadda iyo ganacsatada Soomaaliyeed la wadaagay dadaalka ay dowladda Soomaaliya galineyso xoojinta xiriirka Imaaraadka, taas oo ka dulqaadaysa caqabadaha iyo tabashooyinka ay qabaan.
Jaaliyadda iyo ganacsatada Soomaaliyeed waxay Madaxweynaha Jamhuuriyadda uga war-bixiyeen xaaladda bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta, iyaga oo sheegay xiriirka labada dal ee xumaaday sanadihii la soo dhaafay in uu saameyn weyn oo dhaqaale ku yeeshay ganacsatada Soomaaliyeed.
Waxa ay uga mahad-celiyeen Madaxweynaha mudnaanta uu siinayo hagaajinta xiriirka muhiimka ah ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka.
Ugu dambeyntiina Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xubnaha Jaalliyadda kula dardaarmay xoojinta midnimadooda iyo in ay is-caawiyaan, islamarkaana ay si wanaagsan kula noolaadaan shacabka iyo dowladda aan walaalaha nahay ee Imaaraadka.
Madaxweyne Xasan oo kulan muhiim ah la yeeshay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Imaaraadka pic.twitter.com/PxzCdPda7r
— RADIO HALGAN (@rhalgan) June 23, 2022
Previous articleGudoomiye ku xigeenka golaha Shacabka oo gaartay Garowe
Next articleWARBIXIN: 10-ka Saxiix Ee Dhici Kara Suuqa Kala Iibsiga Xagaaga.
Mareykanka oo war kasoo saaray casuumad la sheegay in Biden u...